World News – EverBestMM
Ever Y | July 29, 2020
နြူကလီးယား လကျနကျတှကေ သူတို့နိုငျငံ ရဲ့ လုံခွုံရေး ကို အာမခံခကျြပေးနိုငျတဲ့ အတှကျ မွောကျကိုရီးယား အနေ နဲ့ စဈပှဲတှေ တိုကျခိုကျ ဖို့ မလိုအပျတော့ဘူး လို့ ခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံအနျ က ပွောခဲ့ ပါတယျ။ ကိုရီးယားစဈပှဲ ကို အဆုံးသတျစေ ခဲ့တဲ့ အပဈအခတျ ရပျစဲရေး ၆၇
အဖြေသည်ကား လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေသော တရုတ်-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး နှင့် နည်းပညာ စစ်ပွဲကြီးမှ ဈေးပေါပေါ နှင့် ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ် အဖြစ် ခိုလှုံနိုင်ရာ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလအစပိုင်း တွင် တရုတ်ပြည် မှ သေမင်းတမန် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြီး ကြောက်မက်ဖွယ် စတင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာချိန်တွင်တော့ ဗီယက်နမ်သည် ၎င်းတို့၏ နယ်ခြားကို တင်းကျပ်စွာ
မြောက်ကိုရီးယား ကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ဘယ်လို စဝင်လာနေပြီလဲ??
မြောက်ကိုရီးယားမှာ အများပြည်သူ သွားလာတဲ့ နေရာတွေမှာ နှာခေါင်းစည်း မဝတ်မနေရ ဝတ်ကြရဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်,REUTERS .. မြောက်ကိုရီးယားမှာ အများပြည်သူ သွားလာတဲ့နေရာတွေ မှာ နှာခေါင်းစည်း မဝတ်မနေရ ဝတ်ကြရ မြောက်ကိုရီးယားမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ယူဆ ရတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရက ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တ ရုတ် ဘာ သာဖြင့် ဆန်းရှား ဟု ခေါ်ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ် လို Three Gorges ခေါ် လျိုကြီး သုံးသွယ် ရေကာ တာကြီး သည် ယခုအခါ တရုတ်ပြည် အလယ်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်း တွင် မိုးများ ပြင်း ထန် စွာ အဆက်မပြတ်
အမောက် ထောင်နေတဲ့ တရုတ် နဂါးကြီး တီကောင် ဘ၀ကို ပြောင်း လဲ သွားခြင်း
Ever Y | July 26, 2020
၁၉၇၀ ခုနှစ်က လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP သာသာ ဒေါ်လာ(90) ဘီလျံပဲ ရှိခဲ့တဲ့ တရုတ်ဟာ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် ဒီကနေ့မှာ ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်း (၁၄,၃၀၀) အထိ၊ အဆပေါင်း (၁၅၈) ဆအထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဒုတိယအထိ ဖြစ်လာခဲ့တော့ နဂိုပညာနည်းသူ ပီပီ ” ဆင်းရဲဒဏ်
ကိုဗစ် သတင်းတွေ ရှေ့နောက် မညီ တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား မှာ တကယ် ကူးစက်သူ သောင်းနဲ့ ချီ ရှိနေပြီလား?
မြောက်ကိုရီးယားက ကေဆောင် မြို့ကို လော့ဒေါင်း ချလိုက် ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါ လက္ခဏာပြနေတဲ့လူနာကို သောကြာနေ့နေ့လည်က အဲ့ဒီမြို့မှာ တွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်လို့ KCNA မြောက်ကိုရီးယားသတင်းဌာနက ကြေညာသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် လောက်က တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားကို ပြန်ခိုးဝင်လာသူ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲ့လောက် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်လို့ လွယ်ကူသလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ က လက်ရှိ တရုတ် သူလျှို ဆိုသူတွေ ရဲ့ အရှုပ် တော်ပုံများ…
ပြင်သစ်- တရုတ် – စင်ကာပူ – အမေရိကန် တရုတ်စစ်တပ်က သူလျှိုလို့စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ သုသေသနပညာရှင် Tang Juan ကို ကြာသပတေးနေ့ က ဖမ်းဆီးမိခဲ့ တယ် လို့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေက ပြော ပါတယ်။ Tang Juan ဟာ San Francisco မြို့က
ရုရှားသမ္မတ ပူတင် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မယုံကြည်နိုင်စရာ ကောင်းလွန်းလှတဲ့ အချက် အလက်များ
Shwe Khit ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအကြောင်းပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေး မှာကတော့ ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ လူသိနည်းလှသော ထူးထူးဆန်းဆန်း အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးမှာမို့လို့ ဗဟုသုတရအောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ဦးနော်…. ၁။
Ever Y | July 25, 2020
တောင် တရုတ် ပင်လယ် မှာ တင်းမာမှုက မြင့်တက် လာ တယ် ။ အမေရိ ကန် က Houston မြို့ က တရုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကို ပိတ်လိုက်တာကို တုန့်ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ၀ူဟန်က အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ကို လည်း တရုတ်က ပြန်ပိတ်လိုက်တယ် ။ အ မေ